तर्सो : ह्याँती गर्ने कुरा - AahaSanchar
Home आहा बिचार तर्सो : ह्याँती गर्ने कुरा
ह्याँती न ह्वाँती भन्ने मुख्खैती हो । एक्कै घरन्वा बल्दहरू मिर्याउ कत्ति स्वाउछैन । स्वाव्वई पनि कस्तोरी बाबै ? आजसम्म एउटै भकार्नु खायापिया, नाँच्याखेल्या र हुक्र्याबर्या । कुर्रै गर्ने हो भन्या बा सक्यात नभया पनि माता सक्यातै हुन क्यारै । त्यो किल्ली देख्ता सिल्लीलाई पनि बैराक लाउ हुनुपर्च । हुन ता कोइकोइले लार ठान्दा हुन् । साँच्चै तेई भया पनि गोस्याँले ख्याल गर्दा स्याल हुने कुरा सम्जेल्नुपर्ने हो । क्या निउँ पाउँ र कनिका बुकाउँ भन्नेहरूवा काइदाले कल्लाई फाइदा गर्च आपैm चालपा भइयो । कुर्रै गर्न लाज्जौ मर्नु, हुनु बैराक होला ? यिनेरूलाई जुदाइकिन लाप लग्ने एकाद बाइक नाम्रो भन्ने को भयो र ? यइ ता छ, अत्ति भइया खत्ति होइन्च खत्तिपछि मत्ति खुल्च क्यारै । त्यो भन्दा बरु पैइलैबाट कत्ति पनि खत्ति हुन नदिने उपाँयहरू सप्पैले खोज्जेल्न पा हुन्थ्यो ? पछ्या थैले केई फाँर्दैन । पइलाले साँच्चै भन्या छन् साँर्याउ जुदाई बाच्छाउ मिच्चाई । गोस्याँले जकचेत नगर्ने हो भन्या जुदिकिन हात्तिया सिङ फाल्नन् भन्ने जग्जग्गी । सिङ मात्रै फाल्या ता क्यार्दो र ? च्याट्टै पर्याउ तिख्खे नाउ रह्ैजाँदो, कइलै भिर पर्लान भन्ने पिर्छ भन्नु हुन्च ।
कत्नाम्रो हल्सारा नपर्ने हल बल्दले खेतीपाति गर्नन्, अन्नले भकारी भर्नन्, बाँजोबुकेरो जोत्नन्, ओज्र्याउ घर पोत्नन भन्दा ता माटाउ हुँदो । म ताक्चु मुरो बन्चरो ताक्च घुरो भन्दाइनी भइयो छ कोबेला । क्या फरक पत्र्यो, भित्रभित्रै पिर्रिकिन मिर्रिन लाइया छन् यार । ह्याँ, बुरी माईलाई मात्रै स्याना बाच्छाबाच्छीलाई क्यारी जथार्ने हो भन्ने बैराक लाउछ । कत्नाम्रो बर्या र घाटु मिलिकिन सिप्पैसित्त खेत उकास्नन भन्याउ ता मथाङ्दिै धौ जोर्ना भइया छन भन्नु हुन्च । ताल थाप्दै मिर्याउ चाल्कीले सप्पैलाई तर्सो पारेकै छ । भोली शत्तुरबैरियौं हाँस्सो नहोई क्यारै । हुन ता तमी हाम्ले मात्रै चुच्चो दुखाइन क्यार्ने हो र ? रिम्टो चलाउने गोस्याँहरूले क्यार्ने सोच्या छन् । हँइन्तो ? कैलै फोर्ने, कैलै जोर्ने, कैलै झोर्ने, कैलै चोर्ने, कैलै जुदाउने, कैलै कुदाउने, कोइलाई लराउने, कोइलाई हराउने, कोइलाई सराउने गोस्याँउ नौटङी नबुज्याउ भया भन्नु ? सिङ्खुर फालिकिन जत्ति जुद्या जुदायता पनि त्यो दिन मिल्नैपर्च क्यारै । स्वादौं पछी भन्दा पैइलै मिल्दा वंश र गोत्र चिन्निने । उइछारी, सप्पैले सोज्जो चिताईकिन मत्ति फर्कापच्ची तर्सो पनि कयार्न हुँदो र ?
दुख्या घाउनु मलिम लाउने डाङ्टर र वैद्यहरू पनि टार्रियास्ता छन् । दुई भाइको मिर्याइले वीरुहरू रित्यान्चन् र भीरुहरू मात्यान्चन् । भाइ फुट्या गँवार लुट्या भन्ने आत्ति नचलोस् हात्ति । सात्तै न तल्लाई न मल्लाई गिद्धलाई पनि नहोइ कामना गर्नै पर्यो क्यारै । उत्ताबाट तम्रा साँर्याले दिउँसै रात पारीकन साँदी मच्काल्यो भन्चन् । बरु तेख्खा बिरुद्ध हुक्र्यापची एक मुठी माटो जोग्गिदो बराठै । हँइन्तो ? भकाराभित्रै मिर्याउ देख्ता मतारीलाई पर्नु पिर पर्याउ होला । अरु जस्तो गर्याता पनि मतारीलाई स्वाउने काम सप्पैले गर्नुपर्च, र्वाउने काम कोइले नगर्नुपर्च । भर्कल ता ह्याँ, दुखी दग्दीले ‘लेख लैइजा गइजा ह्याँ भैसा भोक्ले मर्या, यत्तासम्म बिपत पर्या अब मनको होइजा’ भाका सुनाउन लाथ्या ।
नसुर्रियौं, नर्मियौं, नर्पियौं भनिकिन केराकेटीले अथ्र्याल्चन । बुज्नेले कुरो नबुज्या पची आङ्ननु जौउरा पर्ने नै भयो त्यो ज्यानलाई तर्सो बर्नेई ता भयो । कुर्रै गर्ने हो भन्या आग्गाउँ बिउ र झक्राउ निउ कइल ठूलो भयो ? चायो भन्या जगर्तै माँसेल्च । हँइन्तो ? तेइभइकिन काम कुरो मेस्सैसित गर्दा नाम्रो हुन्च भन्नु हुन्च । बाउको अंश नातीहरूबाट माङदाइनी गर्नु ता भन क्यारै । ह्याँती गर्ने कुरा, एउटै माका सन्तानहरू खाया सात्तै, नखाया सात्तै, लाया सात्तै, भोको बस्या सात्तै र नाङ्ङो बस्या सात्तै प स्वाउला क्यारै । कोइ छुल्या नहुँने निम चलापचि को मुर्की होला ननाम्रो मान्ने ? एउटै चरणमा चर्नेहरूले मिलिजुली चर्ने, तल्थी माथ्थि सर्ने, मिठा कुरा गर्ने र जाक्ता सुइना देख्ने गर्नु पर्योे । सप्पैको चाना क्या छ भन्दा गोस्याँले पनि सप्पैको सोजो चिताइकिन तर्सो मिल्काल्नु पर्च । नत्र…….? समाप्त
Previous articleआहा सञ्चार साप्ताहिक रुकुम बर्ष ६, अंक ३७, चैत २० २०७५
Next articleमापसे गरेर जरिवाना तिर्ने शून्य
aahasanchar - November 23, 2018